के हो छैटौं इन्द्रिय ? कसरी हुन्छ यो जागृत ? « Kakharaa
के हो छैटौं इन्द्रिय ? कसरी हुन्छ यो जागृत ?
३० चैत, काठमाडौं । छैटौं इन्द्रियका बारेमा धेरैले सुनेका छौं । कयौंले अनुभति पनि गरेका हुनसक्छौं तर देखेका भने कसैले छैनौ । नदेखिनुनै यो ईन्द्रीयको विशेष बिषेषता हो। सामान्यतया मानिसको शरीरमा नाक, कान, आँखा, छाला र जिब्रो गरी जम्मा पाँचवटा इन्द्रिय हुन्छ । यी पाँच इन्द्रियलाई दृष्टि, सुध्ने शक्ति, स्वाद, सुन्ने शक्ति र स्पर्श भन्ने गरिन्छ ।
तर, हाम्रो शरीरमा अर्को एउटा ईन्द्रीय पनि हुन्छ, जसलाई छैटौ इन्द्रिय भनिन्छ, जो आँखाले त देखिदैन तर त्यसलाई अनुभति गर्न भने सकिन्छ । जसलाई बोलीचालीको भाषामा ‘सिक्स्थ सेन्स’ पनि भनिन्छ । आखिर, ‘सिक्स्थ सेन्स’ भनेको के हो ? यो अनुभुति कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ? कसरी यसलाई जागृत गर्ने ? यी यावत् कुराहरु छन्, जसबारे बुझेको खण्डमा हामी पनि आफ्नो छैटौ इन्द्रिय (सिक्स्थ सेन्स) जागृत गर्न सक्दछौ ।
हाम्रो शरीरमा कपालको ठिक तल एउटा नरम छिद्र हुन्छ, जसलाई ब्रहारंध भनिन्छ । त्यहीबाट सुषुम्ना नाडी मेरुदण्डको हड्डी हुँदै मुलाधार सम्म पुग्दछ । भनिन्छ, इडा नाडी शरीरको बायाँ भाग र पिंगला नाडी शरीरको दायाँ भागमा रहेको हुन्पंगला नाडी शरीरको दायाँ भागमा रहेको हुन्छ । जबकी सुषुम्ना नाडी बीचमा रहेको हुन्छ । यही नाडीलाई नै सात चक्र र छैर्टा इन्द्रियको केन्द्र मानिने गरिन्छ । सामान्यतया छैटौं इन्द्रिय सुप्त अवस्थामा रहेको हुन्छ । यसलाई विभिन्न पद्धति अनुसार सक्रिय गराउन सकिन्छ ।
भनिन्छ, छैटौ इन्द्रिय जागृत भएमा व्यक्तिको मस्तिष्कले दस गुणा ज्यादा काम गर्न थाल्दछ र आफ्नो वरिपरि भैरहेको गतिविधिलाई पूर्वाभास गर्न सक्दछ । यसबाहेक, व्यक्तिले आफू वरिपरिको नकारात्मक शक्तिलाई समेत महसुस गर्न सक्दछ । तर त्यसको लागि छैटौं इन्द्रिय के हो भन्नेबारे जानकारी हासिल गर्न जरुरी छ । किनकी एक पटक छैटौ इन्द्रिय जागृत भएमा मानिसले विभिन्न क्रियाकलाप गर्न सक्छ ।
कसरी जागृत गर्ने छैटौ इन्द्रियलाई
प्राणायामद्वारा पनि छैटौ इन्द्रियलाई जागृत गर्न सकिन्छ । र छैटौ इन्द्रियलाई जागृत गर्न सबैभन्दा पहिले वायु कोशिकालाई जागृत गर्न पर्दछ । फोक्सो र हृदयको करोडौ वायु कोशिकामा हावा नपुगेर पनि मस्तिष्कको केही भागले काम गर्न सक्दैन ।
दुवै आँखी भौको बीच भागको भागमा केन्द्रित रहेर नियमित ध्यान गर्नाले आज्ञाचक्र जागृत हुन थाल्दछ । र, छैटौ इन्द्रिय जागृत हुन थाल्दछ ।
त्राटक क्रियाबाट पनि छैटौ इन्द्रियलाई जागृत गर्न सकिन्छ । त्राटक क्रियामा व्यक्ति आँखा नझिम्काई लामो समयसम्म एक टक भएर बस्न सक्दछ । केही समय एक टक भएर बस्नाले पनि मानिसको एकाग्रता बढ्दछ र छैटौ इन्द्रिय जागृत हुन थाल्दछ । यसको लागि केही समय अभ्यास गर्न जरुरी छ ।